काउकुती लाग्दा किन हाँसो उठ्छ ? – Samacharpati Samacharpatiकाउकुती लाग्दा किन हाँसो उठ्छ ? – Samacharpati
केही जनावरहरुलाई पनि काउकुती लाग्ने गर्छ । शार्कहरुलाई थुतुनोको ठीक मुनि काउकुती लगाउँदा तिनीहरुले क्निस्मिसिस् (हल्का काउकुती) महसुस गर्छन् । तर गार्गलिसिस् (निकै हाँसउठ्तो काउकुती) चिम्पान्जी, गोरिल्लाहरुमा मात्र देखिन्छ ।